Fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna Orinasa sinoa tratry ny fitsaram-bahoaka
Niharan’ny hatezeram-bahoaka ny fitrandrahana volamena voalaza fa tsy ara-dalàna tao amin’ny fokontany Ambalatany kaominina Andranomavo distrika Mananjary.
Antony, tsy ara-dalàna ny fitrandrahana sady nosimbana ihany koa ny tetezana miampita mankany amin’ny kaominina Marofototra, raha ny fanazavana. Efa ela ny mponina no nitaraina saingy tsy nisy nihaino. Nampiaka-peo tao amin’ny antenimieram-pirenena ihany koa ny solombavambahoaka avy any an-toerana Haja Mananjary sady efa nampandre ny minisitera, saingy tsy nisy fandraisana andraikitra. Efa taorian'ny famotehana nitranga afak’omaly, vao nilaza ny avy ao anivon'ny minisitera fa ho tonga ao Ambalatany anio alarobia hanakatona ny fitrandrahana, hoy hatrany ny fazanavana. Tsy nikasi-tanana na iza na iza ny vahoaka ary tsy nangalatra na inona na inona fa nandrava ireo fitaovana fotsiny. Ny solombavambahoaka Haja dia nanambara fa tsy ekeny ny mety hamoretana ny vahoakan'Ambalatany miaro ny taniny sy ny rano toy ny nahazo an-dRaleva tao Vohilava, hoy ny fampitam-baovao. Voalaza fa ireo sinoa ireo ihany no efa nampitondra faisana an'i Vohilava ary izao miditra an-keriny ao Ambalatany izao.